Zeevou's Zvimiro | Property Management Mashandisiro
Zvimiro zveZeevou - Property Management Automation
Zeevou's Zvimiro zvine chinangwa chekuwedzera huwandu hwe otomatiki, kuti ugone kusunungura nguva yako uye kutarisisa kukura bhizinesi rako. Yedu ficha seti iri kugara ichichinja kupa vatengi vedu mhedziso yakanakisa muProperty Management Automation.
Zvinowanikwa pakati pekutenderera
Chikwata chedu kuZeevou chakashanda nesimba kugadzira software inotarisana neicho chaicho-hupenyu PMS otomatiki nyaya. Maitiro edu akakurudzirwa zvakanyanya nemakore edu e ruzivo muindasitiri inoshandirwa. Zvakare, isu tinokoshesa kwazvo mhinduro uye kubvunzana nevamwe vakawanda-nzvimbo dziri kure dzekugamuchira vatariri. Tiri kuenderera mberi tichiunganidza mhinduro kubva kuvashandisi vedu kuona kuti isu tinokoshesa yedu yekuvandudza nguva nekuda kwekushanduka kwezvido zveVamwe vedu.
Maitiro ekubhadhara aZeevou anotendera iwe kuve mukutonga kwemubhadharo wako, nekudaro uchivandudza yako yemari-kuyerera.
Famba uchienda kuZeevou sekusaita nepazvinogona napo nekutanga kwedu kudzidziswa uye shanduko yekuchinja.
Nyatso gadzirisa mashandiro ako paunenge uchiyera bhizinesi rako rekurendesa pazororo nemhando mbiri dzemakarenda.
Simbisa yako webhusaiti organic chinzvimbo mune yekutsvaga mhedzisiro neZeevou yakavakirwa-mukati blogging mashandiro.
Wedzera markup kumatengo anotumirwa kune yega OTA uye yekubhuka chikuva kuti uwane iyo imwechete purofiti kune yega yekubhuka.
Tora mabhenefiti kubva kuOTA uye yako yakananga kubhuka saiti pasina kubhadhara chero makomisheni kuZeevou.
Shingairira kuburitsa ma invoice ekugara kwevaenzi vako, yekuwedzera-yakatengwa, kubhadharisa dhipoziti yekuchengetedza, nezvimwe.
Zvidzivirire kubva mukubiridzira uye kubhadharisa uchishandisa Zeevou yakasarudzika 3-D Yakachengeteka Mahara maficha.
Vaka uye chengetedza hukama nevemabhizimusi maabookis, pasina kurasikirwa nezvavanoda chaizvo.
Chengeta kwete chete yeiyo ruzivo rwevaridzi varipo asiwo nezve ruzivo rweanouya.
Nyatso veta muenzi wako usati wapa mukana kune ako zvivakwa nerubatsiro rwaZeevou.
Ipa chaiyo-nguva kuwana kune vashandi vane akasiyana mvumo mazinga, kuenzanisa mashandiro uye chengetedza nguva.
Nyore maneja makambani ekunze & nyore kuwana runyorwa rwemabasa avakapihwa.
Mhanya zvinopfuura imwechete brand zvese kubva kune imwechete login, gadzira akawanda mawebhusaiti mune kuenda, uye nyore maneja ese pamwechete.
Sanganisa yako wega webhusaiti kana iyo yaZeevou neyedu yakatsikiswa yekubheja injini kutyaira zvakanyanya kunongedza.
Wedzera purofiti yako margins nekutengesa zvimwe zvigadzirwa uye masevhisi uchishandisa Zeevou zvinowedzera.
Itai kuti mushandirapamwe wenyu wekushambadzira ugadzire nekupa mavocha kune vako vakavimbika vashanyi, tarisiro, nezvimwe.
Vhura nyika nyowani yerunako, kureruka uye mukana webhizinesi rako rekugamuchira vaeni!
Yedu Zvimiro zvinokomberedza otomatiki ezuva nezuva mabasa. Zeevou inodzora manejimendi manejimendi uye mashandiro ekuita kuti hupenyu hwako huve nyore. Yedu integrations nevamwe vanobatsirana nesoftware vanotipa isu kutomesa bhizinesi rako kubva paA kusvika paZ. Kubva pamitengo ine simba kusvika padanho nekuwanika kwekuwanika. Isu tinopa pamusoro 200 channel, uye otomatiki kubhucha kudzosa kuburikidza neyedu mbiri-nzira API kubatana, isu tine musana wako.
Kamwe kubhucha kwarova Zeevou, yedu yakasarudzika 5-Nhanho Kubhuka Kusimbisa Maitiro inotora. Izvi zvinoita kuti kubhucha kwako kugadzirisa kuve kwakarongedzwa zvisinei nekwaanobva. Vese vashanyi vanofanirwa kuzadza online cheki-fomu, yakajeka kubhadhara uye kuchengetedzeka dhipoziti yekugara kwavo. Inovimbwa zvizere uchishandisa 3-D Yakachengeteka ekubhadhara ma link, kusaina Mitemo uye Maitiro uye nekupa yavo ID. Check-in mirairo inongobuda chete kamwe chete zvimiro zvese zvaunoda zvasangana. Nenzira iyi iwe unogona kuve nerunyararo rwepfungwa mukuziva kuti hapana mvumo yekuwana kune ako zvivakwa anozopihwa kune ane njodzi muenzi.
Yedu system zvakare inogadzirisa ese ako ezuva nezuva mabasa. Kuderedza musoro uye kudzikisira mukana wekukanganisa kwevanhu. Isu tinofukidza kuchengetedza dzimba, kugadzirisa, kuchengetedza mabhuku uye otomatiki kutaurirana.
Zvemberi maficha anosanganisira nharembozha yevanochengeta dzimba. Vazhinji-chikamu chevashandi kuwana, pamwe neicho chaicho-nguva kuburitsa muridzi portal kuitira kuti varimari vako vatevedze mari yavo vasina kutora chero yako nguva.